I-WhatsApp vs Signal - Yikuphi Okufanelekile? - Komphakathi
Izinsuku manje sezihambile lapho abantu bebekhokhela ukuthumela imiyalezo ngezingcingo zabo. Ngemuva kokuqhakaza kwe-IM (imiyalezo esheshayo), izinkampani ezinjengoFacebook zilibamba lelo thuba. I-IM isebenzisa i-inthanethi ukuthumela imilayezo yakho ngaphesheya.
Ingxenye enhle kunazo zonke ukuthi imahhala, futhi awudingi ukugijimela ngaphesheya usesha umbhoshongo ukuthumela umlayezo. Lo mbhalo uzoqhathanisa izinsiza ezimbili ezithandwa kakhulu zemiyalezo esheshayo i-WhatsApp ne-Signal. Zonke izici zizobhekwa, futhi ekugcineni, umenyezelwa owinile. Ngakho ake siqale.
I-WhatsApp vs Signal - Ukuqhathanisa okuningiliziwe
Ukubuka konke kwe-WhatsApp
Isici esiyinhloko seWhatsapp nesiginali ukuthumela imilayezo eqondile nge-inthanethi. I-WhatsApp manje isiyingxenye yomphakathi we-Facebook, ikunikeza amandla amaningi wokusebenzisa amandla wezokuxhumana. AbakwaWhatsapp babuye bakhiphe isibuyekezo esisha esisekela i-UPI nezinkokhelo zokuthengiselana, nokuyinto engajwayelekile kakhulu yensizakalo ye-SMS. Ungabelana futhi ngeziqeshana ezincane ezizonyamalala ku-WhatsApp. Noma kunjalo, lesi sici asitholakali ku-Signal.
Izibalo ze-Youtube - Kufanele Ukwazi
Ukubuka konke kwesiginali
Noma kunjalo, iSignal ikwenza ngendlela ephephe kakhulu kune-WhatsApp. Kukhona inketho yokugcina imiyalezo amahora angama-24, futhi kusetshenziswa ezinye izivumelwano eziningi zokuphepha. Isiginali ithi ayikho idatha yakho egcinwayo, okungenzeki neze nge-WhatsApp. Zombili izinhlelo zokusebenza zisekela ukuvinjelwa kogaxekile nabantu. Kokubili amaqembu ezinsizakalo axoxa ngokuxoxa, agcina izingxoxo, nezingcingo zevidiyo.
1. Isikhombimsebenzisi se-WhatsApp
I-Whatsapp inendlela ebalabala kakhulu kusixhumi esibonakalayo sonke. Kuyaqinisekisa ukuthi ingqikithi eluhlaza okomhlophe ihlala ibonakala phakathi kwazo zonke izingxoxo. Ixhasa imodi emnyama futhi elula. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi akukuhle kangako. Kufanele ube nolwazi oluthile oluyisisekelo lokusebenzisa i-App ngokugcwele. Ngenxa yokugcwala ngokweqile kwezici, kwesinye isikhathi kuba yinkohliso ukuthi yisiphi isici esikhona.
2. I-Signal Interface
I-interface yomsebenzisi incane kakhulu. Akunasikimu sombala kanjalo. Ingxenye ehamba phambili ngeSiginali isikhombimsebenzisi esibonakalayo sinembile. Konke kutholakala phambi kwakho, kungaba izinkinobho, amaqembu, izingcingo. Ngakho-ke kuba lula ngokwengeziwe ukusebenzisa i-App.
Ukuphepha kwe-WhatsApp -
Yonke into okuthiwa isevisi yamahhala ivame ukuza nentengo futhi hhayi umaki wentengo kepha izindleko zedatha yakho. Yize i-WhatsApp ithi inokubethela kokuphela kokuphela, abantu bayadina mayelana nokuyisebenzisa. I-Facebook ingumnikazi wensizakalo futhi sonke siyazi ngenqubomgomo yedatha ye-Facebook.
Ukuphepha Kwesiginali -
Ngakolunye uhlangothi, iSiginali ivikeleke kakhulu kuneWhatsapp. Ukubuyekezwa ku-Signal kuwubufakazi bokuthi banokuvikeleka okungcono, futhi abantu bajabule. Nalolu Hlelo Lokusebenza futhi isekela imiyalezo zinyamalale, okwenza kube ephephe kakhudlwana. I-WhatsApp nayo inesici sokuthola abantu; yingakho beba nokungabaza okuningi ngokusebenzisa insiza.
I-WhatsApp ikwazile ukusebenzisana nezinkampani ezinkulu njengoba manje isivele ingaphansi kwe-Facebook. Iningi lezici zabo ukumelwa okufanayo kwe-Facebook ngaphandle kodonga lwe-newsfeed. Kulezi zinsuku, iWhatsApp ibuye isebenzisane nohlelo lwe-Indian UPI, olukhombisa ikusasa elizinzile.
Isiginali insizakalo ye-SMS nje; ayinakho ukusebenzisana ukwenza i-App ijabulise. Noma kunjalo, izici azonakalisiwe nakancane kulolu hlelo lokusebenza. Uzophuthelwa okunye “okungeziwe”
Ukuhambisana komsebenzisi we-WhatsApp -
With emhlabeni Abasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane ezi-2, iWhatsApp uhlelo lokusebenza lokuqala lwemiyalezo emhlabeni. Inokulandwa okungaphezulu kwezigidigidi ezi-5 ku-Google Play Isitolo kuphela (leli inani lokulandwayo okungadidanisi nenombolo yabasebenzisi). Futhi, i-WhatsApp isetshenziswe kabanzi kumakhompyutha ngokusebenzisa i-WhatsApp Web.
Ukuhambisana komsebenzisi wesiginali -
Kodwa-ke, iSignal inamashumi abasebenzisi abayizigidi. Inokulandwa kwezigidi eziyi-10 ku-Google Play Isitolo. Kubukeka sengathi i-WhatsApp inabasebenzisi abaningi kuneSignal, noma kunjalo, lapho abantu bevuswa ekuphepheni, izinto azibukeki zilungele i-WhatsApp.
1. Ukutholakala Kwedivayisi ye-WhatsApp
Le nsizakalo iyatholakala ku-android / iOS / Windows kanye naku-MAC. Kodwa-ke, isipiliyoni samawindi asisihle kangako; kuzwakala njengokungezwa nje kweWhatsApp. Womabili amadivayisi wakho adinga ukuxhumeka kunethiwekhi efanayo ukusebenzisa insiza yedeskithophu yakho.
2. Ukutholakala Kwedivayisi Yesiginali
Ngisho iSiginali iyatholakala kuwo wonke amadivayisi abhalwe ngaphezulu. Inenzuzo kune-WhatsApp, okungukuthi, iyatholakala ku-LINUX yabahleli bezinhlelo zokwabelana ngamakhodi abo. Kufana nenguqulo ye-WhatsApp yeGitHub. Kubuye uhlelo lokusebenza oluzimele olungadingi ukuthi uxhume amadivayisi akho kunethiwekhi efanayo.
Isiphetho: Yikuphi okungcono kakhulu?
Izici ezibalulekile Winner:WhatsApp.
Inani Labaphumelele Kubasebenzisi:WhatsApp.
Owinile wokutholakala Kwedivayisi:Isiginali.
Njengoba imiphumela ikhombisa, iWhatsApp ingathola ukunqoba lapha. Njengoba inokusebenzisana okuningi nabasebenzisi, kuyakhanya. I-Signal isuselwa kubantu abangaphezu kohlangothi lobuchwepheshe be-spectrum. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokuthi i-Facebook ithenge i-WhatsApp, kube nokugcwala kakhulu kwezici. Ungahle uthande ukubheka ukwakheka okuncane nokubukeka kohlelo lokusebenza olunikezwe iSignal.
Ngiyethemba uthole ukucaciseleka mayelana nokuthi iyiphi i-App ongayikhetha ngenkathi ulanda. Okuwukuphela kwento iSignal enayo ngaphezulu kwe-WhatsApp ukuphepha. I-WhatsApp inganikeza okuningi ngohlu lwayo lwezici olungapheli. Uma uneminye imibono noma imibuzo ephathelene ne-What's App and Signal, sazise ebhokisini lokuphawula ngezansi.
Amagama Eqembu le-WhatsApp angu-350 +